Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆
အပေါ်က စာရေးဖို့.. ဒီတခေါက်စာတော်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်..။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၅၀၀ ( အေဒီ ၁၅၀၀)ကတည်းက အမေရိကန်ဆိုတာ ရှိပါတယ်..။ မြန်မာပြည် ရခိုင်ဒေသကို အမေရိကန်မ “Cecilia” တယောက် ရောက်နေစဉ်မှာ ပေါ်တူဂီပင်လယ်ဓမြတွေဖမ်းခေါ်သွားပြီး ဖိလစ်ပိုင်က ကျွန်ဈေးကွက်မှာရောင်းချခံရဖူးတဲ့ ဇတ်လမ်း အထောက်အထားရှိဖူးပါတယ်..။
မာမူခိုင် မူဆင်ပါလား ခမြာ…
အနော့် မျိုးဆက် ပြတ်မသွားအောင်
စာလုံးပေါင်းတွေ OK လား..။
လူမျိုးဟူသည် မျိုးနွယ်များ၊ ဗီဇများ၊ သွေးများ ရောထွေးယှက်နွယ်စီးဆင်း မြစ်ရေအလျှင်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲနေပါ၏။
. မြစ်ရေအလျှင် အစား…
.မြစ်ရေအလျဉ် လို့… ပြောင်း ရေးမလား…။
မျိုးရိုးဗီဇ ၈၀%၀န်ကျင်၊ မှာ အစက်ကလေး ၂ စက် (း) ထည့်လိုက်ပါအုန်း။
သက်တန်း အစား သက်တမ်း ဖြစ်သင့်တယ် မဟုတ်လား။
အဲ့အပိုဒ်မှာ ၄င်း ဆိုတဲ့ စာလုံးများအစား လည်းကောင်း လို့… သုံးသင့်ပါကြောင်း ။
ပီမိုးနင်းတို့ခေတ်ကလိုသာ ရေးချင်လျှင်ဖြင့်… ၄င်း အတိုင်း ထားလိုက်ပါ….
စမ်း ပြီး သတ် ရင်… မကောင်းဘူးထင်ပါကြောင်း…
ဆိုတော့…. သတ် သတ်ပြီး.. ပုံထားမှာပဲလား…
တိန် တိန် တိန် စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ်
ဂိန် ဂိန် ဂိန် ဘပြောင်စိန်
”အမေရိကန်ဝန်ကြီး မေးခွန်းထုတ်တဲ့ အမျိုးသားလက္ခဏာ (National Identity)”